Vaovao - Torohevitra momba ny fanaovana THERMOPLASTICA
Ny welding dia ny dingan'ny fampiraisana ireo sehatra amin'ny alàlan'ny fanalefahana azy ireo amin'ny hafanana. Rehefa mihombo thermoplastics, ny iray amin'ireo singa fototra dia ny fitaovana. Raha mbola manodidina ny plastika ny olona dia mbola maro ny olona no tsy mahatakatra ny fotony, izay manakiana ny las tsara.
Ny laharana voalohany amin'ny thermoplastika welding dia tsy maintsy lasanao toy ny plastika toy ny plastika. Mba hahazoana kofehy mafy sy tsy miova dia ilaina ny maka antoka fa mitovy ny substrateo sy ny tehinao; ohatra, polypropylene ho polypropylene, polyurethane ho polyurethane, na polyethylene ho polyethylene.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny welding ny karazana plastika sy ny dingana samihafa mba hahazoana antoka fa azo antoka.
Polypropylene (PP) dia iray amin'ireo thermoplastika mora ampiasaina indrindra ary ampiasaina amin'ny fampiharana maro samihafa. Ny PP dia manana fanoherana simika tena tsara, hery misintona voafaritra tsara, tanjaka avo lenta ary polyolefin azo antoka indrindra. Ny rindranasa voaporofo amin'ny alàlan'ny PP dia ny fitaovana plating, tanky, ductwork, etchers, hood de fume, scrubber ary orthopedics.
Mba hahafahana manamboatra PP, ny mpiorina dia mila apetraka eo amin'ny 572 ° F / 300 ° C; Ny famaritana ny mari-pana dia miankina amin'ny karazana welder novidinao sy ny tolo-kevitra avy amin'ny mpanamboatra. Rehefa mampiasa welder thermoplastic miaraka amina singa 500 watt 120 volt fanafanana dia tokony apetraka 5 psi eo ho eo ny mpanara-maso ny rivotra sy ny rheostat amin'ny 5. Amin'ny fanaovana ireo dingana ireo dia tokony ho eo amin'ny 572 ° F / 300 ° C ianao.
Thermoplastic mora somary mora azo koa ny polyethylene (PE). Ny polyethylene dia fanoherana ny fiatraikany, manana fanoherana miavaka miavaka, tanjaka avo lenta, mora entina ary ambany rano. Ny fangatahana voaporofo ho an'ny PE dia fitoeram-pako sy liner, tanky, sambo laboratoara, tabilao ary slide.
Ny fitsipika manan-danja indrindra momba ny fangejana polyethylene dia ny ahafahanao mandroso ambany hatrany amin'ny avo fa tsy avo hatramin'ny ambany. Midika izany, azonao atao ny manamboatra kofehy fanamafisam-po polyethylene ambany (LDPE) mankany amin'ny ravina polyethylene (HDPE) avo lenta fa tsy ny mifamadika amin'izany. Ny antony maha-tsotra dia tsotra. Arakaraka ny maha avo ny hakitroky no vao mainka sarotra ny manapotika ireo singa hangeja. Raha tsy azo ravana amin'ny taham-mitovy ireo singa ireo dia tsy afaka miditra miaraka tsara izy ireo. Ankoatry ny fahazoana antoka fa mifanaraka ny hatevinao, ny polyethylene dia plastika mora azo amboarina. Mba hamafana ny LDPE dia mila manana maripana ianao amin'ny 518 ° F / 270 ° C, ny regulator dia 5-1 / 4 ka hatramin'ny 5-1 / 2 ary ny rheostat amin'ny 5. Toy ny PP, HDPE azo averina amin'ny 572 ° F / 300 ° C.
Torohevitra momba ny tariby mety
Alohan'ny fametahana thermoplastika dia misy dingana vitsivitsy vitsivitsy izay mila raisina mba hahazoana antoka fa azo antoka. Diovy ny faritra rehetra, ao anatin'izany ny vy vy, miaraka amin'ny MEK na solvent mitovy amin'izany. Alao ny substrate ampy lehibe hanaiky ny vy vy ary avy eo nanapaka ny faran'ny ny vy vy amin'ny zoro 45 °. Raha vantany vao nanamboatra ny mari-pana ny welder dia mila manamboatra ny substrate sy ny tehina ianao. Amin'ny alàlan'ny fampiasana tendrony hafainganam-pandeha mandeha ho azy dia be ny asa fanomanana natao ho anao.
Tazomy ny welder tokony ho iray santimetatra ambonin'ilay substrate, ampidiro eo amin'ny tendrony ny vy vy ary afindra in-telo na inefatra mihetsika ilay izy. Ny fanaovana izany dia hanafana ny tsoraka fantsom-boaloboka mandritra ny fanafanana ny substrate. Ny famantarana ny substrate dia vonona ny hodiovina dia rehefa manomboka mahazo effet fogging - mitovy amin'ny fitsofana amin'ny vera.
Ampiasao ny fanerena mafy orina sy tsy tapaka, tsindrio ny bokin'ny tendrony. Ny baoty dia hanosika ny tehina welding ao anaty substrate. Raha misafidy ianao, raha vantany vao miraikitra amin'ny substrate ilay vy, dia azonao atao ny mamela ilay tehina ary hisintona azy ho azy.
Ny ankamaroan'ny thermoplastics dia azo zahana ary ny tanjaky ny lasitra dia tsy ho voakasik'izany rehefa sanded. Ampiasao taratasy sandoka 60 grit, fasika amin'ny tapany ambony amin'ny vakana lasitra, avy eo miasà mankany amin'ny takelaka mando 360-grit mba hahavitana farany. Rehefa miasa miaraka amin'ny polypropylene na polyethylene dia azo atao ny mamerina ny endriny manjelanjelatra amin'ny alàlan'ny fanamainana kely ny tampon-kavoana miaraka amin'ny fanilo miloko mavo mivelatra. (Ataovy ao an-tsaina fa ny fomba ara-dalàna ny fiarovana ny afo dia tokony harahina.) Raha vantany vao vita ireo dingana ireo dia tokony hanana las ianao izay mitovy amin'ny sary eo ankavia havia.
Ny fitadidiana ireo torohevitra etsy ambony ao an-tsaina dia mety ho dingana mora ianarana ny thermoplastika welding. Ora vitsivitsy hanaovana fanazaran-tena dia hanome ny "fahatsapana" amin'ny fitazonana ny tsindry mety amin'ny tsorakazo midina mankany amin'ny faritra las. Ary ny fanandramana amin'ny karazana plastika samihafa dia hanampy amin'ny fifehezana ny fomba. Raha mila fomba sy fenitra hafa dia mifandraisa amin'ny mpaninjara plastika eo an-toerana.